Fetim-pirenena sy Can: tolotra manokana omen’ny Telma | NewsMada
Fetim-pirenena sy Can: tolotra manokana omen’ny Telma
Mifanojo tanteraka ny fetim-pirenena, fiverenan’ny fahaleovantena sy ny fandraisan’i Madagasikara any amin’ny lalao iraisam-pirenena baolina kitra Can any Egypta. Tsy avelan’ny Telma handalo fotsiny ireo fotoan- dehibe ireo, fa tsy maintsy ezahiny ny hanomezana fahafam-po ny mpanjifa. Zava-baovao ny tolotra Telma Net One Day, ahazoana manao internet avo 10 heny. Ao anatin’izany ny 50Mo ny datas isan’andro iray, ny 500 Mo ny alina, nefa amin’ny sarany 1.000 Ar.
Manampy ireo, hiampy 50% ny bonus datas raha mividy Telma Net One Day amin’ny alalan’ny MVola, izany hoe hiakatra 800 Mo ny datas amin’io sarany 1.000 Ar io. Ho hita ao amin’ny fidirana ao amin’ny sokajy MVola amin’ny finday avokoa ireo tolotra ireo.
Manan-kery, mandritra ny lalao Can andraisan’ny Barea Madagasikara anjara, atao any Egypta, io tolotra io.
Ankoatra izany, misy koa ny tolotra Bestseller M’Ora 500 azo ampifanarahana, ampiasaina amin’ny Telma Net One Day. Mora, sahaza ny rehetra. Azo ampiasaina amin’ny lafiny rehetra amin’ny vidiny 500 Ar. Misy koa ny tolotra hafa, avy amin’io M’Ora io, toy ny M’Ora night ( ho an’ny amin’ny alina), ny Fety M’Ora, ny M’Ora One, ny M’Ora + 2.000, ny M’Ora+5.000, sns.
Fehiny, maro ny safidy, arakaraka ny fanirian’ny mpanjifa isan-tsokajiny amin’izao fetin’ny Fahaleovantena sy ny Fifaninanana baolina kitra Can, andraisan’ny Barea anjara izao.